Farmaajo oo ka dalbaday Rooble in Jubbaland ka dhigo degaan Cadow heysto | KEYDMEDIA ONLINE
5 August 2021 Howlgal Al-Shabaab xubno looga dilay oo ka dhacay Bakool
5 August 2021 Wasiir Fowsiya oo sheegtay inay sii kordhayaan Kiisaska Covid-19
4 August 2021 Garabka Cabdi Xaashi oo ka hor yimid go’aankii RW Rooble
4 August 2021 Xilliga ay dhaceyso doorashada guddoonka guddiga doorashada SL
4 August 2021 Qoorqoor oo ku dhawaaqaya Musharaxiinta Aqalka Sare
4 August 2021 MW Xasan Sheekh miyaa ka tanaasulay tartanka doorashada?
4 August 2021 Muqdisho oo saaka meel la maro la la’yahay
Farmaajo oo ka dalbaday Rooble in Jubbaland ka dhigo degaan Cadow heysto
Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa ugu baaqey Ra'iisul Wasaaraha inuusan fulin dalabka Farmaajo, oo uu ku tilmaamay qar iska xoornimo iyo is-miidaamin siyaasadeed.
MUQDISHO, Soomaaliya - Hogaamiyaha Xisbiga Mucaaradka Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa kashifay xog xasaasi ah oo ku saabsan in Farmaajo uu ku cadaadinayo Ra'iisul Wasaare Rooble inuu Jubbaland u aqoonsado gobolka uu cadow heysto.
"Waxaan Xog-sugan ku helaynaa in MW Farmaajo uu ku cadaadinayo RW Rooble in uu Jubbaland u aqoonsado deegan cadow heysto, doorashana lagu qaban karin ilaa iyo inta laga xorreeynayo. Haddii uu sidaas yeelo waa qar iska tuurnimo iyo daldalaad siyaasadeed, waxaana ugu baaqayaa RW Rooble in uusan taladaas yeelin," ayuu yiri CC Shakuur.
Waxuu Musharaxa sidoo kale sheegay in Farmaajo uu go'aankan ka eegayo dantiisa gaarka ah, ee ku aadan doorashadda oo uu doonayo inuu kursiga kusoo laabto mar kale. Villa Somalia ayaa qorsheysay inay qabato doorashadda Garbahaarey ee Xildhibaanada, iyadoo u diiday inuu maamulo Axmed Madoobe.
Meelaha uu ku tashanayo Farmaajo inuu ka helo Xildhibaanno u codeeya Febuary 8, 2021 waxaa kamid ah Galmudug, HirShabeelle, Koonfur Galbeed iyo magaaladda Garbahaarey, oo beeshiisu degto, waxaana la diiday damaciisa aan u adeegaynin danta dalka iyo dadka.
Siyaaadda dibadda iyo tan gudaha midna Farmaajo kuma guuleysan inuu salka u dhigo mudadii 4ta sano ee uu xafiiska joogay, iyadoo hadda uu qori dab ah ku tuurey Kenya oo horey xiisadda kala dhaxasay Soomaaliya ahayd mid heerkii ugu hooseysay maraysa.
Mucaaradka wuxuu sheegay in Farmaajo uu arinta Kenya u adeegsanayo olole doorasho, waxayna ugu baaqeen inuu joojiyo dagaalka dibadda, ee uu ka shaqeeyo gudaha sida in Jubbaland Ciidanka DF kasoo saaro, lana bedelo gudiyadda doorashadda aan sharciga ahayn.
0 Comments Topics: axmed madoobe doorashadda 2020 farmaajo gedo nisa
Guddoomiye degmo oo magac dowladeed ku dhacaya shacabka
Warar 5 August 2021 8:46
Derkeeley, waxa ay ka mid tahay degmooyinka la daalaa-dhaca dhibaatada jid la’aanta, nadaafad xumada iyo amni yarida, waxaana sida muuqada loogu sii daray boob iyadoo loo marayo magac dowladeed.
Wasiirka xaalufiyay badda dalka oo ‘naftiis’ u baqaya